Uyini izidakamizwa "Pramistar"? Ukufundiswa mayelana izimpendulo izidakamizwa uzobe kuchaziwe ngezansi. Siphinde ngikuxoxele ukuthi izakhiwo lokhu izidakamizwa, wamiswa ngayiphi injongo, ukuthi unakho yini imiphumela emibi kanye contraindications.
Ukwakheka, incazelo, amafomu
Ngo iphakheji ithengiswe lesi sidakamizwa "Pramistar"? Amaphilisi (imibono mayelana izidakamizwa kukhona okuxubile) ezibekwe kule uhlaka iphakethe, eziqukethwe amakhadibhodi amaphakethe.
Ingqikithi asebenzayo kuyinto pramiracetam nomuthi. Futhi, yakhiwa nezinsizasenzo ngesimo polyethylene glycol, colloidal Silica anhydrous, crospovidone, i-calcium stearate, cellulose hydroxypropyl, ama-titanium dioxide, i-polyethylene glycol, microcrystalline cellulose futhi hypromellose.
amaphilisi Camera kukhona ukuma mhlophe futhi side nge Valium.
Kanjani lesi sidakamizwa "Pramistar"? Izibuyekezo odokotela bathi uphiko asebenzayo ithuluzi iphathelene nootropics, pyrrolidine nemikhiqizo kanye racemates. Ukulungiselela kuthuthukisa nenkumbulo, ugqozi oyenza izinqubo kanye ikhuthaza zokufunda.
Umgomo we isinyathelo yalesi izidakamizwa engakaze wafunda kuze kube sekupheleni. Nokho, ochwepheshe bangase baphikise ngokuthi izidakamizwa uyakwazi kusebenze okusezingeni eliphezulu ziyezwana bamba nomsebenzi neuronal ka choline cholinergic ebuchosheni.
Kufanele kuqashelwe ukuthi le izidakamizwa e mbuzo uye bahileleke synthesis phosphatidylcholine. Isebenzisa neurocytes ulwelwesi isakhiwo futhi kuthuthukisa plasticity yabo.
Kanjani umphumela lesi sidakamizwa "Pramistar"? Nobufakazi ibonisa ukuthi lokhu ejenti akusho ifa isinyathelo sine, kodwa ngesikhathi esifanayo, ithinta ngqo izinhlelo emaphakathi kanye autonomic sezinzwa.
Isithako asebenzayo zomuthi kwandisa ngesikhathi lapho abantu singagxila lutho. Futhi, izidakamizwa kuthuthukisa nenkumbulo futhi oyenza isebenze umsebenzi ngokwengqondo.
Ngemva amaphilisi kokuthola kubuyiselwa isakhiwo we kumiswa reticular, kanye evamile ubuchopho izicubu microcirculation.
Izazi zikholelwa ukuthi le imithi siyasebenza kakhulu njengenhlangano antidepressant.
I pharmacokinetics imithi ngomlomo
ngabe izidakamizwa amuncwa umzimba, "Pramistar"? Izibuyekezo ukunikeza ukuthi ngemva umthamo isithako esebenzayo ngokushesha futhi ngokuphelele angena egazini. Pramiratsetama okuqukethwe eliphakeme egazini waphawula ngemuva kwamahora amabili. Inkathi yayo uhhafu-ukuphila kwama-awara asithandathu.
Umuthi akuyona akheka esibindini futhi asisho abophe ukuze plasma amaprotheni. Yena okukhipha ezingaguquliwe umchamo.
Yini izidakamizwa "Pramistar" angabelwa? Izibuyekezo asho ukuthi izindlela ezinjalo ngenkuthalo esetshenziswa:
Kufanele kuqashelwe ukuthi le izidakamizwa ingasetshenziswa esikhathini yokutakula emva kuhlasimulise okulimala ebuchosheni unhlangothi ischemic kwasebekhulile ukuthuthukisa ukucabanga nezinqubo ngekhanda, ukwandisa nogqozi, ukugxilisa ingqondo, futhi engasenandaba nokuphila, ukuqeda ukucasuka, ucindezelekile futhi ahlukahlukene iziyaluyalu engqondweni yethu .
Kungaphansi kwaziphi izimo alinakunikezwa "Pramistar" (amaphilisi)? Imiyalelo, ukubuyekezwa usho Izimo ezilandelayo:
bekhulelwe nangenkathi bencelisa,
iguliswa ketshezi izidakamizwa;
nesifo esinzima hepatic noma ukungakhuli kwezinso.
Izidakamizwa "Pramistar": yokusetshenziswa
Impendulo ukuphumelela amaphilisi, ungathola khona kanye ekupheleni sihloko.
Ngokusho imiyalelo, kubhekwe indlela okumelwe zigwinywe lonke. Ukuze kuzuzwe elamukelekile umuthi kufanele kuthathwe okungenani inyanga. Njengomthetho, imishanguzo ye izinsuku ezingamashumi ayisithupha.
Izidakamizwa "Pramistar" letimisiwe ithebhulethi kabili ngosuku. Ukulungiswa umthamo ezigulini esezikhulile ayidingekile.
Abantu ne isifo sezinso kumele kuhlolwe ngokuthi umsebenzi wabo ngesikhathi Inkambo yokwelashwa. Uma e inqubo nalutho, imishanguzo kufanele inqanyulwe.
Kuze kube manje ayikho amacala ukweqisa izidakamizwa zomuthi enixoxa ngalo. Uma imithamo Kunconywa kuthiwa lidlule, kubalulekile ukwenza lavage esiswini, futhi uthathe chelators.
Ingabe enqabayo izidakamizwa yokusabela "Pramistar"? Izibuyekezo bathi imiphumela emibi ngaleli thuluzi awuvamile.
Kwezinye izimo, imicimbi elandelayo:
isiyezi, ukuyaluza okukhulu, ubuhlungu bekhanda, ukundindizela;
ukuqunjelwa, kome umlomo, ubuhlungu besisu, isicanucanu;
ukuqwasha, dysphoria, incontinence urinary, ukudideka;
sokuzincisha ukudla, incontinence fecal, cramping.
Qiniseka ukuthola emayelana nokusebenzisana yakhe izidakamizwa ngaphambi kokusebenzisa lolu imithi. Ngokusho imiyalelo, it is hhayi Kunconywa ukuphuzwa "captopril", "Digoxin", "warfarin" futhi "theophylline".
Ukulungiselela "Pramistar" uyakwazi ukunciphisa platelet wokuhlanganisa izinqubo. Kule ndaba akufanele kuhlangene anticoagulants futhi inhibitor ka platelet wokuhlanganisa.
uhlangothi okunjalo nemiphumela njengoba ukucasuka, ukuqwasha noma ukudideka, iyakhula nge kanyekanye reception "thyroxine" futhi "triiodothyronine", kanye namanye ama-hormone.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa in iziguli esingamahlalakhona kwezinso kufanele kuhambisane control esiqinile umsebenzi so-renal.
Uma isiguli libonisa komzimba okufana ukudideka, eliqhaqhazelayo nesiyezi, it is hhayi Kunconywa ukuba ashayele imoto.
Synonyms, amanani kanye analogue zomuthi
Kuyinto efanayo nelithi ukulungiswa ithuluzi "pramiracetam". Kukhona uchungechunge analogs ukuthi ube indlela efanayo senzo. Lezi zihlanganisa imithi ezilandelayo: "Pikamilon", "Aminalon," "Lear," "Biotropil" "Glycine", "Vazavital", "bIGF", "Vitsebrol", "Encephabol", "Gamalate B6", "Cere "" Dendriks "," Fenotropil "," Cavintonum "," Phenibut "," Calcium Gopantenat "," Fezam "," Vinpotropil "," Pantogam "," Noben "" Piracetam, "" Tiotsetam "," Omaron " "Kogitum" Noofen "Noopept", "Nootropil", "Neuro-Norm", "Tserakson", "Neyrovin", "Kognum", "Kvattreks".
Thenga izidakamizwa eRussia ngempela eziyinkinga. Ngakho-ke, iziguli eziningi kakhulu walithenga Pharmacy inthanethi. Kufanele kuqashelwe ukuthi izindleko izidakamizwa kuphezulu kakhulu futhi kufana ruble 1500-2500.
Izidakamizwa "Pramistar": mayelana nokubuyekezwa umphumela
Naphezu kweqiniso lokuthi ukuthengwa izidakamizwa neuroprotective Pharmacy ezivamile eziyinkinga ngakho baningana izimpendulo eziningi. Kufanele kuqashelwe ukuthi axutshwa.
Iziguli eziningi abaye simiselwe yona kanye le imithi, umbiko ukuthi umuthi "Pramistar" kakhulu ngcono futhi kuthuthukisa nenkumbulo futhi usenza sicabange futhi ukuvusa ugqozi ukuze azigcine ekhuthele.
Abanye abantu asebeqedile imithi oyinikiwe, ukusho ukuthi emva ngokuthatha amaphilisi 'babeyizisebenzi ehluke ngokuphelele. "
Ngokuqondene Izibuyekezo ezingezinhle ukuthi ngokuvamile zihlotshaniswa ekuthuthukiseni ukusabela ezingezinhle. Kulaba miphumela engemihle ingase ibe ikakhulukazi ukugqamisa isicanucanu futhi ukozela. By the way, ukuwozela kusobala kakhulu emasontweni ambalwa okuqala ukwelashwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi cishe zonke iziguli ngokwanele ngcono kakhulu. Bona baphuphe amaphupho sikhumbuleke futhi acacile nje.
Ngaphezu kokwenza ngcono inkumbulo nangokwengqondo umsebenzi kuyithuluzi eliphumelela kakhulu ekwelapheni wazibonakalisa kuhlasimulise okulimala ebuchosheni, kanye nokwehla amakhono lolwazi kwasebekhulile.
Ngokusho izimpendulo iziguli, umuthi kakhulu ngcono ikhono lokufunda. Siyabonga kuye, ungakwazi kudlule kahle ezivivinyweni zabo. Nakuba enye intsha ukuthi ngemva eyokwenza izifundo zezinyanga zomuthi kubangela obsessions. Nokho, ukuhoxiswa wakhe ngokuzumayo kuholela ukozela kanye ukucobeka.
Abantu abaningi abasebenzisa noma ufisa ukusebenzisa le ndlela yokuxhumana, ephambanisa wentengo. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto izidakamizwa ezifanayo isenzo "Pramistar" eqolo. Ngaphezu kwalokho, kunzima ukufinyelela.
Ngokuphathelene amazwana wezazi, babike ukuthi kokuthatha lesi izidakamizwa kufanele kube kuphela emva kokubonisana udokotela, futhi ngaphansi kokuqondisa kwakhe okuqinile. Kuyadingeka ukuba bakhumbule esiyicabangelayo umuthi senzelwe kuphela ekwelapheni ukwephula sína umsebenzi isimiso sezinzwa esiyinhloko. Yisebenzise uwedwa akuvunyelwe. Uma kungenjalo, lokhu kungathikameza kabi ipilo lesiguli kanye nesimo psycho-ngokomzwelo iyonke.